Farmaajo oo la sheegay in uu si sharci darro ah Xubno u saxiixay - Awdinle Online
Farmaajo oo la sheegay in uu si sharci darro ah Xubno u saxiixay
Xildhibaan Mahad Salaad oo ka tirsan Xildhibannada mucaaradka ee Golaha Shacabka ayaa sheegay in xalay farmaajo uu si sharc darro ah u saxiixay Todoba (7) ka mid ah Sagaalka (9) xubnood ee Golaha Addeegga Garsoorka. Kuwaas oo aan waafaqsanayn Dastuurka Federaalka iyo Sharciga Dhismaha Golaha Adeegga Garsoorka.
.Qoraal dheer oo uu soo saaray Xildhibaan Mahad Salaad ayaa waxaa uu ku sheegay in saxiixaan oo xalay ahaa laga dhigay mid hore maadaama mudada xilheyntiisa ay dhamaatay, sidoo kalena xeerkaan uu kasoo horjeedo Qod. 7aad ee Sharciga Dhismaha Golaha Adeegga Garsoorka.
Hoos Ka Akhriso Qoraalka Xildhibaan Mahad Salaad.
Previous articleUrurka Jaamacadda Carabta oo baaq kasoo saaray muranka doorashada Soomaaliya
Next articleDEG DEG:- Qarax ka dhacay Muqdisho